Ngalaba steeti US na-akwadozi ụlọ ọrụ nnọchi anya US na Ukraine maka mbuso agha Russia
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » EU » Ngalaba steeti US na-akwadozi ụlọ ọrụ nnọchi anya US na Ukraine maka mbuso agha Russia
Ntugharị US inye ndị ọrụ ụlọ ọrụ nnọchi anya US ka ha pụọ ​​​​Ukraine n'ihi mbuso agha Russia ọ bụghị naanị na ngalaba mgbasa ozi US steeti kesara ya na webụsaịtị US Embassy maka Ukraine.
Mgbasa ozi steeti Russia na-akwado RT anwaghị ịgọnarị ma ọ bụ daa ụda mana welitere ozi ahụ ntakịrị n'ịgbakwunye okwu “nyere iwu” n'ikwu: Enyere ezinụlọ ndị nnọchi anya US iwu ka ha pụọ ​​​​na Ukraine, ebe ụfọdụ ndị ọrụ nnọchi anya ụlọ ọrụ nyere ikike ịpụ na a "afọ ofufo" ndabere, dị ka ndụmọdụ njem emelitere nke kwughachiri nkwupụta nke a "Na-aga n'ihu na-eyi egwu agha Russia.
Na Jenụwarị 24, Ngalaba Ọchịchị US nyere ikike ịpụ (“ọpụpụ ikike ikike”) nke ndị ọrụ gọọmentị US ma nye iwu ka ndị otu ezinaụlọ (“ọpụpụ iwu iwu”) nke ndị ọrụ gọọmentị US na US Embassy na Kyiv, dị irè ozugbo.
Ọpụpụ ikike na-enye ndị ọrụ a nhọrọ ịpụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ; achoghi ipu ha. Enyere iwu ọpụpụ maka ndị otu ezinaụlọ chọrọ ka ndị ezinaụlọ hapụ obodo ahụ. A ga-enyocha ọkwa ọpụpụ nke US Embassy n'ime ụbọchị iri atọ.
The Department of State mere mkpebi inye ikike ọpụpụ si Mission Ukraine nke ukwuu nke ịkpachara anya n'ihi na-aga n'ihu Russian mgbalị destabilize mba na imebi nchekwa nke Ukraine ụmụ amaala na ndị ọzọ na-eleta ma ọ bụ bi na Ukraine. Anyị na ndị ọchịchị Ukraine na-ekwurịta banyere nke a nzọụkwụ na-nhazi na Allied na mmekọ embassies na Kyiv ka ha na-ekpebi ha ọnọdụ.
Na mgbakwunye, Ngalaba Ọchịchị ebulila Ndụmọdụ Njem Anyị gara aga maka Ukraine ruo Ọkwa nke anọ - Emela njem n'ihi oke egwu nke nnukwu agha Russia megide Ukraine. Ndụmọdụ njem a adịlarị na ọkwa nke anọ - Emela njem n'ihi COVID-19.
Anyị na-aga n'ihu na-akwado nkwado anyị maka ndị Ukraine ma na-eme ya mgbe anyị na-etinye aka na otu n'ime ihe kachasị mkpa nke Ngalaba, nchekwa na nchekwa nke ndị nnọchiteanya anyị na ndị America. United States kwusiri ike na ụlọ ọrụ nnọchite anya US na Kyiv ka na-emeghe maka ịrụ ọrụ mgbe niile. N'otu aka ahụ, anyị na-ekwusi ike na mkpebi ọpụpụ e nyere ikike/enye iwu agaghị emetụta nraranye anyị n'ịchọta ngwọta diplomatic maka mwelite ndị agha Russia na-akpaghasị oke na Ukraine.
Nkwenye nkwụsi ike nke United States na ọbụbụeze na iguzosi ike n'ezi obodo Ukraine ka siri ike karịa mgbe ọ bụla, dị ka egosipụtara na mbupu na Jenụwarị 22 nke mbụ n'ime ọtụtụ mbupu nke nde $200 ọhụrụ na enyemaka nchekwa maka ndị agha Ukraine, nke Onye isi ala Biden duziri Ukraine na December.
Anyị na-ekwusi ike na Russia na-etinye anyị n'ụzọ dị ugbu a. United States na-ekwukarị maka ụzọ abụọ Russia nwere ike ịhọrọ: mkparịta ụka na diplomacy ma ọ bụ mmụba na nnukwu nsonaazụ. Ọ bụ ezie na United States na-aga n'ihu na-agbaso ụzọ nke mkparịta ụka na diplomacy, ma ọ bụrụ na Russia na-ahọrọ ịrị elu na oke pụta n'ihi ihe agha dị ịrịba ama megide Ukraine, ọnọdụ nchekwa nke ugbu a na-atụghị anya ya, karịsịa n'akụkụ ókèala Ukraine, na Russia-ochie Crimea, na Russia- a na-achịkwa ọwụwa anyanwụ Ukraine, nwere ike ịka njọ na obere ọkwa.
N'ihe gbasara ụmụ amaala US na Ukraine, ọrụ anyị bụ isi bụ ime ka ndị obodo US mara maka mmepe nchekwa na nchekwa, nke nwere ike ịgụnye ozi gbasara nhọrọ njem azụmahịa.
Dị ka Onye isi ala Biden kwuru, agha Russia nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla na gọọmentị United States agaghị enwe ike ịchụpụ ụmụ amaala America n'ọnọdụ dị otú ahụ, yabụ ụmụ amaala US nọ ugbu a na Ukraine kwesịrị ịhazi ya, gụnyere site n'iji onwe ha eme ihe. nke nhọrọ azụmahịa ha kwesịrị ịhọrọ ịhapụ obodo ahụ.
Kyiv Russia Ukraine United States
Israel na-ezube nnukwu ụgbọ elu ndị Juu si Ukraine ma ọ bụrụ na Russia wakporo
Onye isi oche Dr. Walter Mzembi bụ Olileanya Ọhụrụ maka njem nlegharị anya Africa
Nlaghachi njem azụmahịa dị mkpa karịa mgbe ọ bụla
Finnair: Furlough mkpa sitere na mmechi nke ...
Lufthansa gbatịpụrụ nkwekọrịta nlekọta nlekọta tupu…
Ndụmọdụ dị irè iji mee ka njem dị mma na mmalite gị
Preeclampsia nwere ike imetụta afọ ime ọ bụla
Ọgwụgwọ Ọhụrụ akwadoro maka ọnya ọnya…
Ụgbọ elu Istanbul ọhụrụ na Milan Bergamo na AndaluJet
Caribbean Tourism Organisation ahapụrụ ọhụrụ...
Emulsion Polymers Market Size, Share, Uto | Kwuo...
Latvia amachibidoro ngosi ọha 'Z' na…
Ndị njem Dutch hụrụ Bali na KLM n'anya: Ememme maka The ...
Cabify na-arụ ọrụ na Madrid ụgbọ mmiri mbụ nke 40 ...